Amaminerali Esingezelo weMbuzi
Amaminerali Edingekayo Izimbuzi
Ikhalusiyamu (Ca) nefosifithi (P) igcinwa kugebhezi lwamathambo omzimba, izimbuzi zingathatha kule ndawo lapho kunesidingo. Ikhalusiyamu nefosifithi zibalulekile njengezingxenye zamathambo namazinyo futhi kudingeka ukuba zakhiwe amathambo nama-tissue emabhosini ekhulayo. Ubisi buphezulu ku-Ca ngakho ubisi obuningi obunikezayo, unikeza i-calcium engaphezulu. I-Lucerne iphezulu ku-calcium noma ingafakwa ngezinye izifunzo. Ukuntuleka kweCa kungaholela ekulahlekelweni ubisi kanye nomkhuhlane wobisi ku-do.
I-calcium ne-phosphorus zihlangene futhi kufanele zibe khona kumanani ngesilinganiso se-2: 1. I-Phosphorus iyadingeka ekukhuleni kwezicubu nasekuthuthukiseni amathambo futhi kubalulekile ukuba ikhono layo lokubamba amandla ngesikhathi sokugaya. Izinhlamvu ziphezulu eP.
I-Magnesium ithonya ukusebenza kahle kwesistimu yezinzwa futhi ihlobene nezidingo zombili uCa noP.
Amanye amaminerali, njenge-selenium nethusi, ayadingeka kuphela ngobuncane kakhulu - njengezinto ezilandelanayo. I-Copper (Cu) isiza ukugaya kanye ne-selenium kubalulekile ekusetshenzisweni kwe-cell metabolism. Izimpawu zokulahlekelwa zifaka isifo sofuba esimhlophe namabele.
I-Zinc ehilelekile ekukhiqizeni izidakamizwa kanye nokwehluleka kwezimpawu kubandakanya ukunciphisa izinwele ezikhulayo, amabhaktheriya aphakeme emlonyeni nge-saliva ngokweqile, ukuqina kwamalungu kanye nomuntu wesilisa ophansi wesondo.
Ukuntuleka kwe-iodine kungabonakala ekuvuvukala kwezingubo ze-thyroid nezingozi.
Ukudla Amavithamini Namaminerali
Uma kuthengwa ukudla okomkhiqizo wezimbuzi zobisi, umkhiqizi wesondlo ngokuvamile uhlanganisa uhlu lwamavithamini namaminerali. Uma ukudla kwesidlo kungakondliwe, kungase kudingekile ukondla umquba wamaminerali ukuze unikeze ama-micronutrients adingekayo. Kunezinhlobo eziningi zezinkokhelo ezifanele izimo ezahlukene nezinkathi zonyaka. Iningi lamanga liqukethe usawoti ukuze linciphise ukudla, kodwa kucatshangelwa ukuthi izimbuzi zizokwakha ngokwanele ukuhlangabezana nezidingo zazo zamaminerali nezamavithamini.